Somali News 3.3.22
Published March 4, 2022 at 9:24 AM CST
Badhasaabka Kim Reynolds ayaa saxeexay sharci ka mamnuucaya hablaha iyo haweenka beddela inay ku tartamaan ciyaaraha hablaha iyo haweenka ee Iowa.
Mamnuuciddu waxay dhaqan galaysaa isla markaaba waxayna khusaysaa dugsiyada K-12 iyo kulliyadaha bulshada iyo sidoo kale kulliyadaha iyo jaamacadaha qayb ka ah NCAA ama NAIA.
Reynolds waxa uu sharciga ku saxeexay rotunda capitol oo ay ku hareeraysan yihiin haween dhalinyaro ah oo taageersan
Dimuqraadiyiinta iyo u doodayaasha LGBTQ ayaa sheegaya in sharcigu weerarayo koox yar oo arday ah oo la takooro sababo la xiriira tartanka tartanka oo ay sheegeen in la buunbuuniyay.
Toban gobol oo kale ayaa hadda ku jira mamnuucid ciyaaraha fudud ee jinsiga. Qaar badan oo kuwaas ka mid ah ayaa lagu qabtay caqabado sharci oo socda.
Gudida senate-ka ee South Dakota oo ay maamusho Jamhuurigu ayaa meesha ka saaray soo jeedintii Gov. Kristi Noem ee ahaa in la mamnuuco manhajka dugsiyada K-12 ee dadka ku qasbaya inay dareemaan "raaxo la'aan" oo ku salaysan isirkooda. Weli waa la soo noolayn karaa iyadoo taageero ballaaran laga helayo golaha guurtida ee buuxa.
Si wax looga qabto yaraanta shaqaalaha, Degmada Sioux City Community School waxay macalimiinta cusub ku abaal marin doontaa $5,000 oo gunno ah. Macallimiinta beddelka joogtada ah, shaqaalaha adeegga cuntada iyo darawallada basaska ayaa sidoo kale u qalmi doona gunnada shaqaaleysiinta.
Wakiilo ka socda ururka macalimiinta deegaanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan shaqaale cusub oo la abaalmariyay, laakiin degmadu waxay u baahan tahay inay diirada saarto sii haynta
Bandhiga Guriga ee Greater Siouxland ayaa maanta ka bilaabmay Xarunta Siouxland Expo. Munaasabadda 65-aad ee sanadlaha ah waxaa ku jira 230 waabab iyo 165 bandhigyo waxayna soconaysaa ilaa Axadda.
Mid ka mid ah isbeddellada cusub ee sanadkan? Guryo yaryar Dadka ka soo qayb gala bandhigga guriga waxay heli karaan dalxiis guri yar oo cabbiraya todobo fiit oo balac ah 20 cagood.